I-beta ye-Android 12 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
I-Google yethule inguqulo yokuqala ye-beta ye-Android 12 lapho kuye kwaphakanyiswa izibuyekezo eziningi zokwakhiwa kwesikhombimsebenzisi okubaluleke kakhulu emlandweni wephrojekthi. Idizayini entsha isebenzisa umqondo "Izinto Wena" kuthathwe njengesizukulwane esilandelayo se-Material Design.
Umqondo omusha izosetshenziswa ngokuzenzekelayo kuwo wonke amapulatifomu nezinto zesixhumi esibonakalayo, futhi ngeke kudinge noma yiziphi izinguquko ezivela kubathuthukisi bohlelo lokusebenza.
Emsamo uqobo, idizayini entsha yewijethi iqokonyiswa njenge zenziwe zabonakala ngokwengeziwe, ukujikeleza kwamakhona kuthuthukisiwe, futhi nekhono lokusebenzisa imibala enamandla ehambelana netimu yohlelo selinikiwe.
Kungezwe ikhono lokuzivumelanisa ngokuzenzakalela iphalethi lesistimu kumbala wephephadonga okhethiwe: isistimu ithola ngokuzenzakalela imibala evelele, ilungise iphalethi yamanje, futhi isebenzise izinguquko kuzo zonke izinto ezibonakalayo, kufaka phakathi indawo yokwazisa, ukukhiya isikrini, amawijethi, nokulawulwa kwevolumu.
Imiphumela emisha yokugqwayiza isetshenzisiwe, njengokukhula kancane kwesikali nokuhamba kahle kwezindawo lapho uskrola, uvela, futhi uhambisa izinto esibukweni. Isibonelo, lapho ukhansela isaziso esikrinini sokukhiya, inkomba yesikhathi iyanwebeka ngokuzenzakalela futhi ithathe isikhala esasihlala ngaphambili isaziso.
Kubuye kuqhakanjiswe lokho ungeze umphumela wolula imiphetho yokuskrola, okwenza kucace ukuthi umsebenzisi weqe umkhawulo wokuhambisa futhi usufinyelele ekugcineni kokuqukethwe. Ngomphumela omusha, isithombe sokuqukethwe seluliwe futhi siyatholwa. Imodi entsha yesibonisi sokuphela kokuskrola ivulwe ngokuzenzakalela, kepha kunenketho kuzilungiselelo zokubuyisa indlela yokuziphatha yakudala.
Izinguquko zemisindo ebushelelezi zisetshenzisiwe- Uma ushintsha usuka kolunye uhlelo lokusebenza lokukhipha umsindo uye kolunye, umsindo wangaphambili usuthulisiwe kancane futhi owokugcina uphakanyiswa ngobumnene, ngaphandle kokubeka umsindo kolunye.
Futhi, ukwenziwa okuphawulekayo kokusebenza kohlelo kwenziwe: umthwalo ku-CPU yezinsizakalo ezinkulu zohlelo wehle ngama-22%, okuholele ekwandeni kwempilo yebhethri nge-15%. Ngokunciphisa umbango wokukhiya, ukunciphisa ukubambezeleka, nokwenza i-I / O isebenze kangcono, uthuthukisa ukusebenza kwezinguquko kusuka kolunye uhlelo kuya kolunye futhi unciphise isikhathi sokuqalisa sohlelo lokusebenza.
Ukusebenza kombuzo wedatha kuthuthukisiwe ngokusebenzisa ukulungiselelwa okusemgqeni ekusebenzeni kweCursorWindow. Ngemininingwane emincane yedatha, i-CursorWindow ishesha ngama-36%, futhi ngamasethi anemigqa engaphezu kuka-1000, ukushesha kungafika ezikhathini ezingama-49.
I- imodi ye-hibernate yohlelo lokusebenza, evumela, uma umsebenzisi engasebenzisananga kahle nohlelo isikhathi eside, setha kabusha ngokuzenzakalela izimvume ezinikezwe ngaphambili kuhlelo lokusebenza, misa ukukhishwa, buyisela izinsiza ezisetshenziswa uhlelo lokusebenza, njengememori, futhi uvimbele ukwethulwa kwemisebenzi engemuva nokuthunyelwa kwezaziso zohlelo lokusebenza.
Kungezwe imvume ye-BLUETOOTH_SCAN hlukanisa ukuskena amadivayisi aseduze nge-Bluetooth. Phambilini leli thuba belihlinzekwa lapho kutholakala khona ulwazi olumayelana nokuthi indawo ikhona kuphi, okuholele ekutheni kube nesidingo sokunikeza izimvume ezingeziwe zezinhlelo zokusebenza ezidinga ukubhangqwa nenye idivayisi ngeBluetooth.
Kunguqulo yesibili ye-beta, iPhaneli Yobumfihlo kulindeleke ukuthi ivele ngokubuka konke kwezilungiselelo zemvume, okukuvumela ukuthi uqonde ukuthi iyiphi idatha umsebenzisi wohlelo afinyelela kuyo). Izinkomba zomsebenzi wemakrofoni nekhamera zizongezwa kuphaneli, ngosizo lwayo ongavala ngayo umbhobho nekhamera ngenkani.
Ekugcineni, ukwethulwa kwe-Android 12 kulindeleke kwikota yesithathu ka-2021.
Kokwakhiwa kwe-firmware okwenziwe ngomumo kwalokhu kukhishwa kwe-beta, kunikelwa ngePixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4/4 XL, Pixel 4a / 4a 5G nePixel 5, kanye nakwezinye i-ASUS , Amadivayisi we-OnePlus, i-Oppo, i-Realme, i-Sharp, i-TCL, i-Transsion, i-Vivo, i-Xiaomi ne-ZTE.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » I-beta 12 ye-Android isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
Kuhle ukuthi ukhulume nge-android (kulabo abanentshisekelo yokuqhubeka nokuba yisigqila), kepha ubheka ingqikithi yebhulogi, kungangcono kakhulu uma ukhuluma ngezindaba zama-smartphones we-linux wangempela, kanye isoftware yayo, enezindaba ezithokozisayo, ongabiki kuzo. Isibonelo esicacile yiwebhu https://linuxsmartphones.com
Izinguquko zokuqala zamenyezelwa kwimfoloko yeCUPS